Nofoanan’i Rosia ny Fikambanan’ny Vavolombelon’i Jehovah any Samara
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tiorka Tseky Xhosa Éwé
Namoaka didy ny fitsarana ambaratonga voalohany iray any Rosia hoe mitarika ny olona hikomy ny Fikambanana Ara-pivavahan’ny Vavolombelon’i Jehovah any Samara. Nanohana an’io didy io ny Fitsarana Tampon’ny Federasionan’i Rosia tamin’ny didim-pitsarana navoakany, ny 12 Novambra 2014. Nanomboka nanenjika ny Vavolombelon’i Jehovah ny mpampanoa lalàna any Samara, tamin’ny 2014. Avy nanao savahao ny trano fivoriana nohofan’ny Vavolombelon’i Jehovah mantsy ny polisy tamin’izay, ary nahita boky voarara, hono, izy ireo. Efa nilaza ny fitsarana any Rosia, talohan’io, fa mampidi-doza ireo boky ireo, ka nampidirina tao anatin’ny lisitry ny boky voararan’ny Minisiteran’ny Fitsarana Federaly. * Efa nanaraka an’io didy io anefa ny Vavolombelon’i Jehovah any Samara, ary efa nesorin’izy ireo tsy ho ao amin’ny trano fivoriany intsony ireo boky ireo.
Nohazavain’ireo Vavolombelona tany amin’ny fitsarana ambaratonga voalohany sy tany amin’ny Fitsarana Tampony fa ny polisy ihany no nametraka an’ireo boky voarara, mba hiampangana azy ireo. Nilaza koa ireo Vavolombelona fa efa dinihin’ny Fitsarana Eoropeanina Momba ny Zon’olombelona izao raha tena ara-dalàna ilay didy mandrara ny sasany amin’ny bokin’izy ireo. Ankoatra izany, dia nilaza ireo Vavolombelona fa na atao hoe marina aza ilay fiampangan’ny mpampanoa lalàna any Samara hoe nitahiry boky efa voarara izy ireo, dia tsy rariny mihitsy ny sazy nomena azy ireo. Tokony ho nasaina nandoa lamandy fotsiny mantsy ry zareo, na naato kely ny asa ataon’ny fikambanany, fa tsy hoe ilay fikambanana no foanana. Tsy niraharaha an’izany rehetra izany anefa ny Fitsarana Tampony.
Ho mafy ny hanjo ny Vavolombelona raha foanana tokoa ny fikambanan’izy ireo
Mitovitovy amin’ilay nitranga tany Taganrog izao nanafoanana ny Fikambanana Ara-pivavahan’ny Vavolombelon’i Jehovah any Samara izao. Nofoanan’ny Fitsarana Ambony any Rostov, any Taganrog, mantsy ny Fikambanana Ara-pivavahan’ny Vavolombelon’i Jehovah, tamin’ny 2009, satria nolazaina fa mitaona ny olona hikomy. Nanatsoaka hevitra àry ny manam-pahefana tany Taganrog fa voarara tanteraka ao amin’io faritra io ny asan’ny Vavolombelon’i Jehovah. Nampangaina ho mpanao heloka bevava ny Vavolombelona 16 tany Taganrog, tamin’ny 2013, rehefa nanao ny zavatra fanaony ao amin’ny fivavahany. Zavatra ataon’ny Vavolombelon’i Jehovah maneran-tany anefa ilay izy, ary anisan’izany ny any Samara. Nampandoavina lamandy midangana be ny fito tamin’ireo Vavolombelona ireo. Voaheloka higadra ela be koa ny efatra tamin’izy ireo, izay samy anti-panahy eo anivon’ny fiangonana. Tsy nasain’ny mpitsara naloa indray anefa ilay lamandy, satria efa tara loatra vao natao ilay famotorana sy fitsarana. Nataony sazy mihantona koa ny sazin’ireo voaheloka higadra. Nampakatra fitsarana indray ny Vavolombelon’i Jehovah, taorian’izay. Nanapa-kevitra àry ny Fitsarana Ambony ao Rostov, tamin’ny 12 Desambra 2014, fa haverina ilay fitsarana ary mpitsara hafa no hasaina manao an’ilay izy.
Mety hampangaina ho mpanao heloka bevava koa izao ireo Vavolombelon’i Jehovah 1 500 any Samara, rehefa manao ny zavatra fanaony ao amin’ny fivavahany. Mbola tsy hay izay hiafaran’izao raharaha izao. Ataon’ny manam-pahefana rosianina famotorana daholo izao ny Fikambanana Ara-pivavahan’ny Vavolombelon’i Jehovah rehetra any amin’ny faritra samihafa any Rosia. Ho hita eo ihany ny vokatr’izao didy jadona izao amin’ireo Vavolombelona efa ho 180 000 any. Tena atahorana tsy hanana ny fahafahany intsony anefa ny Vavolombelon’i Jehovah sy ireo mpivavaka vitsy an’isa any Rosia, noho iny didy navoakan’ny Fitsarana Tampony iny.
^ feh. 2 Boky 73 an’ny Vavolombelon’i Jehovah no nampidirina tao anatin’ny lisitry ny boky voararan’ny Fanjakana Federaly. Anisan’ny boky hita tao amin’ilay trano fivoriana nohofan’ny Vavolombelon’i Jehovah any Samara ilay hoe Mivavaha Amin’ilay Hany Andriamanitra Marina. Navoaka tamin’ny fiteny 158 izy io, ary 23 970 207 ny isan’ny nozaraina. Anisan’ny boky hita tao koa ilay hoe Fahalalana Izay Mitarika ho Amin’ny Fiainana Mandrakizay. Navoaka tamin’ny fiteny 166 izy io, ary 100 944 355 ny isan’ny nozaraina. Tsy neken’ny Vavolombelon’i Jehovah ilay didim-pitsarana nilaza hoe mampidi-doza ny bokin’izy ireo, ka nametraka fitoriana any amin’ny Fitsarana Eoropeanina Momba ny Zon’olombelona izy ireo.